Puntland waxay la wareegtey awooddii ciidan ee Sanaag bari, xilka riixidii dhoobo & awoodda wasiir Jamaal oo weli taagan. - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home News Puntland waxay la wareegtey awooddii ciidan ee Sanaag bari, xilka riixidii dhoobo...
Walwaal Online (Badhan)-Xukuumadda Puntland ayaa sii xoojisay saamaynta ay ku leedahay gobolka Sanaag tan iyo markii uu xafiiska qabsaday madaxweyne Deni 8 January 2019, iyadoona wixii xilligaasi ka dambeeyey Puntland la wareegtey awooddii ciidan ee gobolkaasi.
Boqolaal katirsan ciidankii Somaliland ee gobolka Sanaag iyo taliayaashoodii ayaa ku soo biiray Puntland waxaana ay si rasmi ah uga mid nqodeen ciidamada Daraawiishta, booliska iyo kuwa birmadka ee Puntland halka qaar kamid ah saraakiishii ciidankana loo magacaabay xilal sare.
Inta badan ciidankii Somaliland ee ku biiray Puntland ayaa la mariyey hanaanka diiwaangelinta casriga ah ee ciidanka oo ay xuquuqdooda ku qaadanayaan habka Danabaysan ee lacagtu ay ugu soo dhacayso accoun askari walba ku lee yahay bangiga.
Xerada tababarada ciidanka ee General Giriin Badhan waxaa hadda tababar uga socdaa dufcaddii labaad oo katirsan ciidanka Daraawiishta Puntland, iyadoona ay dhowaan geli doonaan diiwaanka rasmiga ah ee ciidanka dowaldda Puntland.
Dhanka siyaasadda ayeysan Puntland awood badan ku lahayn gobolka waxaana jirey dhacdooyin shacabka gobolku aad uga soo horjeedeen ayna kamid ahaayeen xilka qaadistii guddoomiye Dhooba-daareed iyo labo kamid ah xildhibaanadii ugu saamaynta badnaa gobolka oo xasaanaddii lagala laabtay.
Wasiirka qorshaynta xukuumadda Soomaaliya xildhibaan Jamaal Xasan ayaa saamayn ku leh gobolka waxaana uu xafiisyo u adeega ka furtay magaalada Dhahar ee qaybta Haylaan, isagoona u soo leexiyey mashaariic uusan soo marin xukuumadda madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni.
Previous articleDaawo; Fanaanada Nimco Dareen Oo Hees Ku Maamuustey Gobolada SSC.
Next articleMaxaa ka soo baxay kulankii M/weyne Deni & James Swan iyo hal arrin oo lagu canaantay Puntland